Daawo: Dood adag oo ku saabsan qaabka shaqada hey´adda barnevernka. - NorSom News
Daawo: Dood adag oo ku saabsan qaabka shaqada hey´adda barnevernka.
Hey´adda barnevernka ayaa dhowrkii isbuuc ee ugu danbeeyay la kulmeysay eedeymo isdabo joog ah, kadib markii dowlada Norway looga guuleystay labo kiis oo barnever ku saabsan. Waxaana dowlada Norway lagu eedeeyay inay jabisay xeerka xuquuqul insaanka Yurub.
Waxaana wali maxkamada xuquuqul insaanka Yurub ee kutaal dalka Faransiiska xiligan dowlada Norway ka yaalo ugu yaraan 30 kiis oo ku saabsan barnevern.
TV-ga qaranka NRK ayaa isbuucii nasoo dhaafay abaabulay dood adag oo muhiim ah, taas ku saabsan hey´addaas. Waxaana la isugu keenay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee saameynta ku leh ama ay ku yeelan karto go´aanada hey´addaas.
Waxaadna ka ogaan kartaa in soomaalida oo kali ah aysan dhibaato joogto ah ku qabin ama kala kulmin hey´adda barnevernka.
Halkan ka daawo: NRK-Deb–Barnevernet
Previous articleTwitter: Dad ku baaqayo in la takooro shirkadaha norwiijiga ah, kadib markii Kristiansand lagu gubay kitaab quraan ah.
Next articleKasoo qeybgal dood cilmiyeed: 2020-Soomaaliya ma u bilow cusubaa? Fursadaha deyn-cafinta iyo caqabadaha.